”Maldini dhaqse ayuu khaladkiisa u garowsan doonaa” – Sino-Europe Sports oo qaniintey Paolo Maldini – Gool FM
”Maldini dhaqse ayuu khaladkiisa u garowsan doonaa” – Sino-Europe Sports oo qaniintey Paolo Maldini
AC Milan's Paolo Maldini looks on at the end of the Italian serie A soccer match against AS Roma at the San Siro stadium in Milan May 24, 2009. REUTERS/Alessandro Garofalo (ITALY SPORT SOCCER)
(Beijing) 11 Okt 2016 – Sino-Europe Sports ayaa ka jawaabtey wararkii uu beryahan ka sheegayay Paolo Maldini ee ahaa in mashruucoodu uusan ahayn sida uu yiri ”mid guuleed’ iyagoo sheegay ”inuu dhowaan garowsan doono sida uu u khaldanaa”.
Maldini ayaa maanta waraysi dheer ku sheegay in sharikadda la wareegaysa AC Milan ee SES ay waddo qorshe ‘guuleed’ balse dallada Chinese-ka – ayaa sheegtay in waloow ay ka “xun tahay” inuu halyeeygani dalabkooda diidey – waxay misna ku adkaysanayaan in ay ka go’an tahay inay Rossoneri kusoo celiyaan figta sare.
“Marka ay timaaddo wararka la isla dhexmarayo ee khuseeya aayaha AC Milan, maareeyaasha SES waxay haatan caddaynaysaa in arrintani aysan ahayn mid ajendaha ku jirtaa,” ayuu u akhrismayay war kasoo baxay SES.
“Muhiimadda SES haatan waa inay iibsadaan AC Milan. Waannu ka gubanaynaa go’aanka Paolo Maldini ee khuseeya dalabkeenna, waayo waxaannu si wayn u rumaysannahay inuu dhaqse u garowsan doono sida uu mashruuceennu u yahay mid guuleed.” ayay daba dhigeen.
AC Milan’s Paolo Maldini looks on at the end of the Italian serie A soccer match against AS Roma at the San Siro stadium in Milan May 24, 2009. REUTERS/Alessandro Garofalo (ITALY SPORT SOCCER)
DIGNIIN KANSAR: Cabsi laga qabo Garoomada uu yaalo cowska Macmalka ah